Depiote tara karama Naoty avy amin`ny minisiteran`ny vola no antony
Nanaitra ny besinimaro ny fanehoan-kevitry ny depiote Paul Bert Rahasimanana na Rossy tamin`ny tambajotran-tserasera hoe “O ry fanjakana ah !
Efa fevrier mbola tsy nandray karama ihany le deputé fa inona le problema eh ? » Somary sadaikatra ihany ny maro naheno fa andrim-panjakana toy ireny ve dia ho tara ny karama ? Nitondra ny fanazavana mahakasika izay moa ny kestora I, ny solombavambahoaka Jean-Michel Henri fa ara-dalàna ny fandoavam-bola eo anivon`ny Antenimieram-pirenena. Ireo depiote mandray ny karamany amin`ny alalan`ny banky (virement bancaire) koa voaloa ara-dalàna. Ho an`ireo mampiasa “bon de caisse” kosa no misedra olana. Hisy naoty ataon`ny minisiteran`ny vola sy ny tetibola fa tsy azo atao intsony ny fampiasana “bon de caisse” ka izay no antony mahataraiky ny fandoavana karama ho an` ny depiote sasany, hoy hatrany ny fanazavana.